အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးမှ တတိုင်းပြည်လုံး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ခံစားရမယ် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမှ ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်
MHT_(27-5-200 မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေကို အင်အားပြင်းထန်စွာနဲ့ ၀င်ရောက်တိုက်ခက်သွားခဲ့တဲ့ ဆိုက်ကလုံးနာဂစ်အပြီးအခုအချိန်မှာတော့ မုန်တိုင်ဒဏ်ကိုဆိုးရွားစွာ ခံစာခဲ့ရတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်နေကြရတဲ့ ကလေးငယ်တွေဟာ မုန်တိုင်ဒဏ်ကြောင့် အမည်ဖော်ရန်ခက်ခဲ့လှတဲ့ စိတ်ရောဂါဝေဒနာတွေကို ခံစားနေကြရတယ်လို့ ထိုဒေသများသို့ သွားရောက်ကာ လူမှုရေးအလှူပေးခဲ့တဲ့ လူငယ်အများအပြားကဆို ပါတယ်။
“ကျွန်မရဲ့သားလေးက အခုမှ နှစ်နှစ်ခွဲပါ။ မုန်တိုင်းကျတဲ့ညက ကျွန်မတို့မိသားစုက လှေကို အုန်းပင်မှာချီပြီးနေခဲ့ကြရတယ်။ တစ်ညလုံးဆိုပါတော့ရှင်။ ကလေးဆိုတာကလည်း ငိုလိုက်တာလွန်ရော။ ကျွန်မတို့ရှေ့မှာပဲ မခံနိုင်လို့လက်လွှတ်လိုက်တဲ့လူတွေ သေပြီးမျောလာတယ်။ တစ်ချို့လူတွေကျတော့ အပင်တွေလဲကျလို့ ပိပြီးသေခဲ့တယ်။ ဒီလိုအမြင်တွေအကုန်လုံကို ကျွန်မတို့ ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရကြရတာပေါ့။ ကျွန်မသားလေးဆိုရင် ကျွန်မ ရေမွန်းပြီး သေပြီလို့တောင်ထင်ခဲ့တာ။ သူသာအဲ့ဒီညက သေခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်မလည်း ဘာမှ လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုရင် တစ်ညလုံး သူငိုနေတဲ့ဟာကို ကျွန်မ နှုတ်နဲ့ပဲ ချော့နိုင်ခဲ့တယ်။ ခေါင်းကို ရေမမြုပ်အောင် သူ့ဖအေက ထိန်းပေးထားတယ်။ ဒီရွာက ကျွန်မအသိ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆိုရင် မီးဖွားဖို့ နှစ်ရက်လောက်ပဲ လိုတော့တာ။ မုန်တိုင်းကျတော့ တက်လာတဲ့ ရေတွေကြားထဲ အသက်မသေအောင် ပြေးရင်းလွှားရင်းနဲ့ အပေါ်ကိုရောက်လို့ ကြည့်လိုက် တော့ သူဗိုက်က ဖောင်းမနေတော့ဘူး။ ကလေးဆိုတာ ဘယ်ကျနေခဲ့မှန်းကို မသိတော့ဘူး။ သူလည်း သွေးနုသားနု၊ စားစရာက ဘာမှမရှိ ကုစရာဆေးဝါးကမရှိတော့ မုန်တိုင်းကျပြီး နှစ်ရက်နေတော့ ဆုံးသွားတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာပဲပေါ့။ သူ့ထက်စာရင် ကျွန်မတို့က အများကြီးခံသာပါသေးတယ်။
Written by Lwin Aung Soe May 30, 2008 at 12:41 pm
Tagged with ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်	« Myanmar cyclone victims die waiting for help
Mizzima (Burmese)အစ္စလာမ်မစ်စစ်သွေးကြွများကြောင့် မငြိမ်သက်ရာ ရှင်ကျန်းပြည်နယ်၌ သတင်းတုများ ဖန်တီးဖြန့်ဝေက ကြီးလေးစွာ ဒဏ်ရိုက်မည် December 8, 2016ရှီကျင့်ဖျင်၏ မိတ်ဆွေဟောင်းကို တရုတ်သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ထရမ့်က ရွေးချယ်ခန့်အပ် December 8, 2016ထိုင်းက ကော့စမွီရေတံခွန်အနီး ပြင်သစ်နိုင်ငံသားတစ်ဦး ထိုးသွင်းပြတ်ရှဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးနေ December 8, 2016ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၏ လာမယ့်နှစ်လျာထားဘတ်ဂျက်သည် ပြည်သူကို ဗဟိုမပြုကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ဝေဖန် December 8, 2016မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်၏ ဘင်္ဂါလီအရေးပြောဆိုမှု ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ရှုတ်ချ December 8, 2016မြို့တွင်းယာဉ်ကြော မပိတ်ဆို့ရန် ကွန်တိန်နာကားများ ညပိုင်းဝင်ရောက်ပြီးနောက် မနက်ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပွား December 8, 2016ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအား သုံးသပ်ခြင်း(နိဂုံးပိုင်း) December 8, 2016သူတစ်ပါး၏ ခန္ဓာကိုယ်အားလှောင်ပြောင်တတ်သူများအား အေမီရှုးမားက ပြန်လည်တုံ့ပြန် December 8, 2016 VOA (မြန်မာ)An error has occurred; the feed is probably down. Try again later. စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အားAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later.လူထုအသံ	RFA (Burmese)MLM လုပ်ငန်းတွေကို တည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့ အရေးယူမည်မွန်ပြည်နယ်က လိုင်စင်မရှိတဲ့ ကျောက်မိုင်းတွေကို အရေးယူမယ်အရေးယူခံရတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၀၀ ကျော်ရှိကမ်းနားလမ်းမှာ ကုန်တင်ယာဉ်တွေကြောင့် လမ်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကို အကူအညီပေး ခွင့်ပြုဟု အင်ဒိုနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ပြောကြားမြန်မာကို ဆန္ဒပြဖို့ မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်က အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကို တိုက်တွန်း Burma Digest InfoHello world! December 8, 2016 Mizzima (English)Saw Tha Wah December 8, 2016Explaining Myanmar’s foreign policy behaviour: Domestic and international factors December 8, 2016Catholic church hit in ongoing fighting in Shan State December 8, 2016Shan State parliament approves proposal to brand NA-B terrorists December 8, 2016Malaysian Ambassador summoned over rally, remarks December 8, 2016Ernest Chan December 7, 2016Companies in Myanmar express concern about regulation, but optimism remains: Survey December 7, 2016Myanmar bans workers going to Malaysia as Rohingya crisis grows December 7, 2016 BBC (Burmese)သမ်မတအိုဘားမား ကုလညီလာခံမှာ IS အန်တရာယျ ပွောမွနျ​မာ့​စီးပှား​ရေး​ဖို​ရမျ USကငျြးပပွငျ​သဈ​တဈ​ဦး အသတျ​ခံ​ရ​တာ အတညျ​ပွု RSF AsiaAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. CNN WorldThousands flee to western Aleppo as Syrian army takes over December 8, 2016As the Syrian army continues to fight its way through the old city of Aleppo, the tide of those fleeing for their lives has becomearaging flood, an avalanche.Why Aleppo is so important in Syria December 8, 2016It's been ravaged by violence for years, and if Aleppo falls now it could markaturning point in Syria's civil war.US and Russia meet to discuss the war's end December 8, 2016The US and Russia's top diplomats are meeting to discuss ways to end the bombing of Aleppo, allow safe passage of those who want to flee the war-torn northern Syrian city and deliver humanitarian aid to its remaining residents, according to senior State Department officials.7-year-old in Aleppo tweets she's 'trapped by bombs' December 7, 2016The family ofa7-year-old girl who has captured the world's imagination with her heartbreaking tweets from Aleppo says the Syrian army has taken control of their area of the city.Imagineaworld without giraffes December 8, 2016It's the tallest land-based mammal in the world.7.8-quake hits near Solomon Islands December 8, 2016A 7.7-magnitude earthquake has hit close to the Solomon Islands, according to the US Geological Survey. The Pacific Tsunami Warning Center has issuedatsunami watch for Hawaii.Le Pen: No schooling for kids of undocumented immigrants December 8, 2016France's far-right party leader, Marine Le Pen, said children of illegal immigrants should be refusedafree education.Marriage rape law to be abolished December 8, 2016Lebanese lawmakers on Wednesday took the first step to overturnalaw that allows rapists to avoid punishment if they marry their victims. The move cameaday after protesters wearing fake-blood-stained wedding gowns confronted lawmakers just steps away from Parliament in the capital Beirut. IPS Top newsAnti-Torture Law Helps Pay Off Chile’s Debt to Human Rights December 8, 2016Fiscal Austerity Has Been Blocking Economic Recovery December 8, 2016Gambia May Not Join African Withdrawals from ICC December 8, 2016Resilient People & Institutions: Ecuador’s Post-Earthquake Challenge December 8, 2016India Steps Up Citizen Activism to Protect Women December 7, 2016G77 Encourages Paris Club to Consider Addis Ababa Action Agenda for Debt Management December 7, 2016The End ofaCycle ? December 6, 2016Climate-Resistant Beans Could Save Millions December 6, 2016Meta	Register	Log in